Ukushintsha kwesimo sezulu kwenziwa ngama-95% womuntu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kwenziwa ngumuntu
Yize umongameli wase-United States, uDonald Trump, ewubeke obala umbono wakhe ngokushintshwa kwesimo sezulu, waze wafika ngisho ekutheni kwakuyinkohliso eyenziwe yiChina inhloso yayo kwakuwukuthola inzuzo yezomnotho kune-United States, umbiko osihloko sithi »National Assessment Isimo sezulu »sikuphethe lokho isidalwa esingumuntu yisona esiphezulu esibhekele okwenzekayo okwamanje emkhathini.
Futhi ngukuthi, izinguquko zezulu bezilokhu zikhona futhi zizoqhubeka zikhona, kepha akukaze kube khona uhlobo olwaziyo ukwenza umthelela onjalo emhlabeni.
1 Ziyini izimbangela zokushintsha kwesimo sezulu njengamanje?
2 Imiphumela esivele ibonakala eMhlabeni
Ziyini izimbangela zokushintsha kwesimo sezulu njengamanje?
Ukukhishwa okuqhubekayo kwe-carbon dioxide emkhathini, ukushiswa kwamalahle, uwoyela kanye negesi yemvelo kuyizimbangela ezinkulu zezinguquko esimweni sezulu esibhekene nazo. Ngamunye wethu ufuna ukuphila kahle, okunengqondo ngokuphelele, kepha sikwenza ngendlela elimaza kakhulu uMhlaba.
Ngokusho kwe- umbiko, kusukela ngo-1950 kuze kube namuhla, umnikelo womuntu ekuguqukeni kwesimo sezulu uphakathi kuka-92% no-123%. Ukushiwo kwaleli phesenti lokugcina kuchazwa ngoba okwenziwa ngabantu kuphikisana nemiphumela yezimo ezithile zemvelo, njengezintaba-mlilo, kodwa ngesikhathi esifanayo zilinyazwa yimiphumela yamagesi abamba ukushisa.
Imiphumela esivele ibonakala eMhlabeni
Njengoba izinga lokushisa lomhlaba wonke landa, amanzi asolwandle »Iyashisa, ibe ne-esidi kakhulu, futhi ibe namazinga aphansi e-oxygen”Kuchaza uKatharine Hayhoe waseTexas Tech University futhi ongumbhali wesifundo. Ngaphezu kwalokho ukuncibilika kwezigxobo kuyashesha, okuzokhuphula izinga lolwandle.
Imicimbi yesimo sezulu efana neziphepho iyaqina. Irma o Harvey ngokuqinisekile bayisampula esincane salokho okuzayo, kuyilapho uTrump eqhubeka nokukuphika.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kwenziwa ngumuntu
IVIDIYO: IGoogle Earth ikhombisa idatha yokungcola komoya
IBonn Climate Summit (COP23) iyavula